Shiinaha Bellows Seal Gate Madax warshad iyo soo saarayaasha | Nortech
Bellows seal valve waalka, ee birta la tuuray, birta birta ah iyo birta daawaha ah, ee uumiga heerkulka sare.
2 ″ -24 ″, jirida soo kacaysa, asliga aan wareegin
Dhammaadka isku xirka RF, BW, RTJ
Cadaadiska cadaadiska Fasalka 150/300/600/900/1500
Naqshad sameynta API600
Waji ka waji ANSI B 16.10
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Bellows Khatimidii Gate Madax Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Waa maxay waalka albaabka xidha?
Bellows Khatimidii Gate Madax waxaa loo ikhtiraacay inuu buuxiyo shuruudaha adag ee cidhiidhiga iyo xaaladaha shaqada ee daran.
marka laga reebo shirkii xirxirida caadiga sida dhammaan waalka iridda, ka bellows seal waalka iridda sidoo kale wuxuu leeyahay qalab xirxira hoosta.
habka loo xirxiro gabi ahaanba waa ka duwan yahay qalab loo yaqaan "bellows seal", tuubbo bir ah oo jimicsi u eg oo ku dheggan salka waalka iyo lafdhabarta, sameysana shaabad aan caddeyn lahayn oo leh khilaaf aan loo dulqaadan karin iyo shaashadda hoosta ayaa awood u leh inay kala bixiso oo ku cadaadin karto Sida boodhku u yahay tuubbo bir ah oo aan kala go 'lahayn, ma jirto meel haba yaraatee ay wax ka soo baxaan si ay u soo baxaan.
Dekedda ku taal xarigga dheereynta dheereeya waxay u adeegtaa sidii barta xiriirinta ee dareemayaasha ogaanshaha dheecaanka dareeraha, si loogu dhawaaqo alaarmiga iyo / ama wax looga qabto haddii ay dhacdo isqabqabsi dillaacay. Markuu bellowsku xirmo, aaladda dareeraha ah ayaa ogaan doonta dheecaanka iyo isugeynta xirmooyinka caadiga ah waxay ilaalin doonaan shaabad macquul ah illaa iyo inta dayactirka lagu sameynayo qalabka.Bellows wuxuu leeyahay nolol adeeg xadidan, taas oo macnaheedu yahay suurtagalnimada jabka ayaa suuragal ah. Tani waa sababta kullanka caadiga ah ee wax lagu rakibo marwalba loogu daro qafis qalabeysan.
Hoosudhaca qaab-dhismeedka udhaxeeya ayaa kujira laguna ilaaliyaa gudaha tuubbada birta qaro weyn.Mid ka mid ah dhamaadka wargeysyada waxaa lagu dhajiyay jirridda waalka, iyo tan kale waxaa lagu dhejiyay tuubbada difaaca. Iyada oo fidinta balaaran ee tuubada ay si xoog leh ugu xiranto galka waalka, shaabad ka daadaneysa ayaa jirta.
Bellows waxay leeyihiin nolol adeeg xadidan, taas oo macnaheedu yahay suurtagalnimada jabka ayaa suuragal ah. Tani waa sababta kullanka caadiga ah ee wax lagu rakibo marwalba loogu daro qafis qalabeysano Shandada hoose waa shaabad xirmeed dheeri ah oo lagu xiro albaabada, waxay ku habboon tahay xaaladaha shaqada qaarkood.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee isweydaarsiga waalka albaabka?
Qaasatan geedi socodka kiimikada dareerayaasha kujira tubooyinka badanaa sun ayey leeyihiin, shucaac iyo qatar. Bellows seal valves vaves. Waxyaabaha hoos yimaadawaxaa loo isticmaalaa in looga hortago daadinta kiimiko kasta oo sun ah hawada. Qalabka jirka ayaa laga dooran karaa dhammaan waxyaabaha la heli karo, Hoos waxaa lagu bixin karaa qalab kala duwan sida 316Ti, 321, C276 ama Alloy 625.
1) Bilowga biraha wuxuu xiraa jirida dhaqaaqaysa wuxuuna kordhiyaa cimri dhererka walxaha qarxa.
2) .Borks la socodka dekedda (ikhtiyaar): Xadhig ayaa lagu xidhi karaa booska ka hooseeya hoosta si loo kormeero waxqabadka.
3) .Labada shaabadood ee jirridda labaad: a) Kursiga dambe ee booska furan; b) Xirxirida garaafka
4).waayo, Bellows seal valve waalka, qaybaheeda muhiimka ah biladaha biraha, dhamaadka hoose iyo jirridda waalka ayaa si otomaatig ah u laalaaban, dhamaadka kore iyo tuubada ilaalintana waa isla otomaatig otomaatig ah sidoo kale Caqabad bir ah ayaa la sameeyaa inta u dhexeysa jirida barta ay ka soo gasho soohdinta cadaadiska iyo dheecaanka geedi socodka ku dhex jira waalka, si loo baabi'iyo qulqulka asliga ah;
5) .Walaalo-buluug-xiran ayaa badanaa la daadiyo iyadoo la adeegsanayo aaladda 'spectrometer mass' si loo ogaado heerarka baxsiga ee ka hooseeya 1x10E-06 std.cc/sec. daadashada, iyo waafaqsanaanta heerarka cidhiidhiga caalamiga ah;
6) Faanbayaasha jaallaha ah ee shaabadaysan ayaa lagu taageeray xirmooyin xirxirida jirridda caadiga ah iyo dekedda la socoshada qulqulka inta udhaxeysa hoosta iyo xirxirida si looga hortago musiibada sii deynta dareeraha halista ah haddii ay dhacdo in hoos u daadan.
7) .Ma aha sida dufanku u kala gooyo oo keliya dunta xididka, Ibta dufanka waxaa loogu talagalay xarkaha waalka, waxaa laga yaabaa inaan saliidaynno jirida, lowska iyo duurka si toos ah, iyadoo loo marayo ibta dufanka;
8) .Wax si khaldan loo qorsheeyay lugo gacan, nolol adeeg dheer, fududahay in la shaqeeyo, amaan badan oo lagu kalsoonaan karo;
Qeexitaannada sheyga hoose ee xirida waalka albaabka?
Magaca badeecada Bellows seal valve waalka
Dhexroor magaceed 2 ”-24”
Jirida Sare u kacaya, jirid aan wareegsanayn
Naqshadeynta Bellows MSS SP117
Dhamaadka Flange ASME B16.5
Butt welded heerarka ASME B16.25
Qiimeynta heerkulka-cadaadiska ASME B16.34
Qiimeynta cadaadiska Fasalka150 / 300/600/900/1500
Heerka naqshada API600
Heerkulka shaqada -196 ~ 600 ° C (waxay kuxirantahay walxaha la xushay)
Heerka kormeerka API598 / API6D / ISO5208
Codsiga ugu weyn Steam / Saliid / Gaas
Nooca hawlgalka GacanQalabka gacanta
(1) Markii la codsado: waxaa la soo gudboonaaday Satellite - Monel - Hastelloy - qalab kale
(2) Markii la codsado: waxaa la soo dersay dayax gacmeed - Monel - Hastelloy - qalab kale
(3) Codsi: 18 Cr - Monel - Hastelloy - qalab kale
(4) Markii la codsado: Birta Nodular - Nitronic 60
(5) Markii la codsado: PTFE - qalabka kale
Codsiyada Bellows seal valves valves
Noocan ah Bellows Khatimidii Gate Madax waxaa si balaaran looga isticmaalaa dhuumaha leh dareeraha & dareerayaasha kale, gaar ahaan dareerayaasha sunta ah, shucaaca iyo qatarta
Batrool / saliid
Kiimikada / Kiimikada
Awooda iyo Adeegyada
Hore: Y Cadaadis
Xiga: Madax Been Abuur
API602 waalka waalka
Hoos udhaca waalka albaabka
bellows seal waalka iridda
Waalka albaabka EN1984
Waalka iridda steel been abuur
Bellow Seal Globe Madax